Fikarohana momba ny firaisana Tantaran'ny Fiainana Fiainana taloha sy ny fanahy & LIfe Phobia: Raharaha Reincarnation Tiorka an'i Sehide Suzulmus | Cevriye Bayri - Fikarohana Reincarnation
Tantaram-pitiavana taloha momba ny fiainana miaraka amin'ny fanahy sy LIfe Phobia taloha: Trangam-panjakan'olo-tokana ao amin'ny vatana vaovao any Sehide Suzulmus | Cevriye Bayri
From: Ireo trangan-javatra momba ny karazana gay vaovao, Boky III, Ireo tranga roa ambin'ny folo ao Libanona sy Torkia, nataon'i Ian Stevenson, MD
Ny famonoana an'i Sehide Suzulmus
Ity tranga ity dia misy vehivavy iray, Sehide Suzulmus, izay novonoina niaraka tamin'ny Abit vadiny, ny volana Janoary 31, 1957. Tena zava-mampihetsi-po tokoa izany, satria nisy mpivady iray novonoina niaraka tamin'ny namany ka toa lasa nifankatia akaiky. Afaka nifankahita sy nifamihina izy ireo tamin'izany. Ireo toe-javatra ireo dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny fanahy manomana ny vatana vaovao mba hiantohana fa ireo izay nifankatia teo aloha dia afaka tafaray tamin'ny fiainana niaina taorian'ny alàlan'ny vatana vaovao indray.
Nodimandry i Abid Suzulmus, vadin'i Sehide, rehefa nilaza tamin'ny mpiasa iray tao amin'ny toeram-piompiany ny tenany fa malemy ny biby. Fotoana alina ary tao anaty haizina, nandehandeha niaraka tamin'ny mpiasa teo amin'ny toeram-pilalaovana i Abit mba hijery ilay biby. Rehefa niondrika i Abit mba handinika ilay biby dia nisy olona namely an'i Abit teo amin'ny lohany tamin'ny barika vy na hamonoana, izay namono azy.
Rehefa tsy tafody tao an-trano i Abid dia nandeha tany amin'ny tranobongo i Sehide, mba hijery izay nanemotra azy. Izy koa dia novonoin'ny famelezana ny lohany. Tahaka izany koa, ny zanany roa, Zihni sy Ismet, dia novonoina tamin'io alina io koa.
Lehilahy roa no nanantona ireo heloka ireo, Ramazan sy Mustafa no anarany. Ho an'ny famaritana tanteraka ny fiainan'ny Abit sy Sehide Suzulmus, azafady azafady ny tranga Abit Suzulmus | Ismail Altinkilic.
Ny vatana teraka tao Sehide Suzulmus
Cevriye Bayri dia teraka tamin'ny 1 1958 tamin'ny XNUMX, tao Adana, Tiorkia, roa taona monja taorian'ny nahafatesan'i Sehide Suzulmus. Ny Kerim Bayri no rainy, izay mpanadio, ary ny reniny dia nantsoina hoe Cemile.
Ny drafitry ny fanahy: fampandrenesana ny nofy
Taorian'ny nahaterahan'i Cevriye, i Kerim, rainy dia nanonofy izay nisehoan'i Abit Suzulmus taminy. Tsarovy fa i Abit no namono miaraka amin'ny vadiny, Sehide. Raha navoaka tsara tao Adana ny famonoana an'i Abit dia nahalala an'i Abit i Kerim. Tao amin'ny nofy, nilaza tamin'i Abitra i Abit fa handefa fanomezana ho azy izy. Rehefa nanontany i Kemi hoe inona ilay fanomezana dia namaly i Abit hoe:
"Ilay tonga miaraka aminao." (1)
Ity nofinofy ity dia efa nipoitra tahaka an'i Ismail Altinkilic, Abit Suzulmus, izay efa taona iray teo ho eo tamin'izay fotoana izay i Kerim dia nanana ny nofiny. Amin'izany, io nofy io dia manondro fa ny fanahy dia afaka miasa tsy miankina amin'ny fampodiana ara-batana, izay resahina ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny Soul Evolution.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Cevriye no manadino ny famonoana azy ary mampiseho ny fototarazo matevina amin'ny vanim-potoana taloha
Raha vao afaka niteny i Cevriye, dia niezaka ny hampita zavatra tsy mazava izy, saingy raha nanatsara ny fahaiza-miteny azy ireo dia nanambara ny teny hoe:
"Namono i Ramazan." (2)
Tahaka ny ankizy kely, Cevriye dia nanana volon-drindrina nantsoina hoe maizina. Ity tohodrano ity dia nanohy hatramin'ny faran'ny taona 15. Ohatra, raha ny herinaratra tao an-trano rehefa nivoaka, dia nanomboka niantsoantso i Cevriye ary nihazakazaka tany amin'ny reniny sady niantsoantso hoe:
"Hamono ahy i Ramazan." (3)
Teo anelanelan'ny roa sy enim-bolana izy dia nilazalaza ny fomba namonoana azy teo aloha. Nilaza izy fa nandeha nitady ny vadiny, izay novonoin'i Ramazan. Nilaza izy fa novonoin'i Ramazan tamin'ny alalan'ny matoà koa izy. Nilaza i Cevriye fa novonoina tao anaty haizina izy ary bevohoka tamin'ny fotoana nahafatesany.
Cevriye nilaza tamin'ireo ray aman-dreniny fa ny anarany dia Sehide ary ny anaran'ny vadiny dia Abit Suzulmus.
Ireo antsipiriany rehetra ireo dia marina ara-tantara, araka ny fitazonana azy Abit Suzulmus | Ismail Altinkilic. Ankoatra izany, nilaza i Cevriye fa i Sehide dia niteraka ny zanany taorian'ny nahafatesany. Raha ny tena marina dia niasa i Sehide Suzulmus tamin'ny fotoana namonoana azy, saingy tsy fantatra mazava fa efa nafahana izy taorian'ny nahafatesany. Tao anatin'ny fanadihadiana momba ny vono olona, ​​ny vatan'ny Sehide dia nesorina tao am-pasana ary hita fa ny ampahany tsy hita tao amin'ny vatana Sehide dia hita fa tena izy tokoa.
Ny fisalasalana iray dia mety manambara fa ny fahalalan'i Cevriye momba ny famonoana Sehide dia mety ho avy amin'ny fampiofanan'ny rainy, Kerim, raha nahitana ny famonoana ireo famonoan'olona ary i Kerim dia nanambara ilay nofinofy izay nahitana an'i Abit. Ny fankatoavan'i Cevriye, izay omena etsy ambany, dia tsy afaka ny ho tafiditra amin'ny fiofanana, satria izy ireo dia fisehoan-javatra hafakely.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Cévrier's Recognition ny havany sy ny namanao taloha
Nandritra ny roa taona i Cevriye dia nahafantatra mpivarotra gliôzy iray efa fantany nandritra ny androm-piainany toa an'i Sehide. Nolazainy taminy fa tamin'ny andro izay namonoana azy, toy ny Sehide, dia nomeny ny mpivaro-bozaka, izay mahantra, ary sakafo sasany nohanina. Nanamafy ilay mpivarotra glase fa nanome sakafo azy i Sehide tamin'ny andro namonoana azy.
Raha kely latsaky ny telo taona i Cevriye, dia nampidirina tany Hatice izy, ilay vadikelin'i Abit Suzulmus. Nolazaina i Cevriye fa namana na mpiara-miasa izy tamin'ny taona lasa, tsy nomena anarana hoe Hatice. Cerviye dia nanondro avy hatrany ny Hatice anarana.
Cevriye dia nahafantatra an 'i Fehime, anabaviny talohan'ny nahatongavany ho nofo tao Sehide Suzulmus. Ankoatra izany, i Cevriye dia afaka namantatra ny Gulserne, izay zanakavavin'i Sehide izay mbola velona. Rehefa nihaona izy ireo, dia nantsoin'i Cevriye zanany, ary rehefa nanontany i Gulserne hoe iza izy, namaly i Cevriye hoe "Gulserne." (4)
Cevriye dia nentina tany an-tranon'ny Suzulmus, renin'i Cemile, ary nanontaniana raha fantany ny tovovavy iray antsoina hoe "ity tovovavy ity." Tsy nomena baiko hafa i Cevriye, fa izy kosa dia namantatra ilay zazavavy toa an'i Hikmet, iray hafa zanakavavin'i Abit sy Sehide Suzulmus. Cevriye avy eo dia nihazakazaka nankany Hikmet, namihina azy ary avy eo dia nitantara taminy ny namonoana azy toy ny Sehide.
Rehefa nampidirina tamin'i Ziki i Cevriye, zanaky Abit sy Sehide izay velona, ​​dia nanaiky izy ary nitomany. Avy eo dia nanambara izy hoe: "Ity no zanako." Nanontany an'i Ziki i Cevriye raha nikarakara azy tsara i Hattice, ilay vadikelin'i Abit. (5)
Noraisin'i Cemile, renin'i Ceviye, ny sarin'ny fianakaviana Suzulmus ao Abit sy Sehide. Raha teo anelanelan'ny roa na telo taona i Ceviye, dia nasehon'i Cemile ny sary tamin'i Ceviye ary nanontaniany hoe iza ireo olona teo amin'ny sary. Namaly i Ceviye: "Ity ny sariko sy ny vadiko." (6)
Rehefa dimy taona i Cevriye ary nandalo toeram-pisakafoanana iray izy sy ny reniny, dia niaiky i Cevriye, namany taloha, Gullu, tao amin'ny trano fisakafoanana. Ny reniny, Cemile, dia tsy nahalala an'i Gullu. Na izany aza, niditra tao amin'ny trano fisakafoanana ry zareo ary i Cevriye dia namaritra tsara ilay vehivavy tahaka an'i Gullu. Gullu dia tokony ho tamin'ny 70 taona tamin'izany fotoana izany ary nolaviny ny fifankahazoan'ny Cevriye na ny fianakaviany. Amin'ny maha-olona azy, izany dia mampiseho fahatsiarovana ny fiainany taloha.
Cevriye nanontany an'i Gullu hoe, "Inona no nanjo an'i Semiha? Izaho dia handeha hanambady an'i Ramazan. Fomba iray hamerenana ahy! "(7)
Semiha Akdi dia tovovavy nampiasain'i Abit sy Sehide. Sehide dia naniry ny hanambady an'i Ramazan, mpiasa hafa, Semiha, saingy nanimba ity planina ity i Ramazan tamin'ny famonoana an'i Abit sy Sehide.
Nadir Mirel dia naman'i Sehide Suzulmus. Rehefa naheno ny fahatsiarovan'i Cevriye amin'ny maha Sehide azy izy dia nitsidika ilay tovovavy roa niaraka tamin'ny namana roa. Ho fitsapana, nanontany an'i Cevriye i Nadir:
"Iza no namanao?" (8)
Ny renin'i Cevriye, Cemile, dia tsy nahalala ny valin'io fanontaniana io, fa i Cevriye kosa nanondro tamin'ny iray tamin'ireo vehivavy hafa tonga niaraka tamin'i Nadir, Nadir Midel no anarany. Raha nanondro an'i Nadir i Cevriye, dia nanambara izy hoe: "Misy ny fikojako." (9) Cevriye dia marina; Nadir no tetik'i Sehide Suzulmus.
Fihetseham-piainana taloha: ny Cevriye's Attachment to Sehide, ny anaran'ny fiainany taloha
Cevriye dia nanana fifandraisana tamin'ny anarana hoe Sehide. Nanontany matetika ny reniny izy mba hanova ny anarany any Sehide. Ity tranga ity, ny olona iray te-hanova ny anarany amin'ny maha-olona azy taloha, dia nitranga ihany koa tamin'ny tranga Abit Suzulmus | Ismail Altinkilic, ary koa ny raharaha Francesco Foscari | Wayne Peterson.
Ny fiainany taloha: Cevriye | Sehide sy Abit Voafody indray i Ismail tamin'ny alalan'ny fanambadiana
Raha nahatsiaro ny fianakavian'i Ismail Altinkilic ny fahatsiarovan'i Cevriye an'i Sehide nandritra ny androm-piainany, dia naniry ny hijery izay hitranga ny fianakaviana roa raha tafangona i Cevriye sy i Ismail. Ismail dia nahatsiaro hatramin'ny fahazazan'ny maha-Abit Suzulmus, vadin'i Sehide, izay novonoina niaraka taminy. Nisy fihaonana teo anelanelan'i Cevriye sy Ismail dia nokarakarain'i Cevriye efa-taona ary dimy taona i Ismail.
Araka ny voalazan'ny rain'i Ismail, rehefa nihaona voalohany i Cevriye sy Ismail, dia nihazakazaka izy ireo, nifamihina ary nanoroka. Ny renin'i Cevirye koa dia nitantara fa namihina an'i Cevirye i Ismail.
Ny rakitsoratr'i Cevirye momba ny fivoriana, izay mifandray amin'i Ian Stevenson, dia ny nitazonan'i Ismail sy nanasongadina ny tanany, fa nifanakalo fanomezana izy ireo ary nifampiarahany nifanaovan'izy ireo tamin'ny fomba namonoana azy ireo.
Nanontany an'i Cevirye i Ismail hoe nahoana izy no tsy tonga nanampy azy rehefa niantso vonjy tamin'ny fotoana namonoana azy izy. Cevirye dia nametraka fanontaniana mitovy amin'i Ismail. Namaly i Ismail fa "akaikin'ny omby" izy. (10)
Niakatra hatramin'ny dimy na enin-taona i Cevirye ka nanondro an'i Abit Suzulmus ho "vadiko." Ian Stevenson dia nanamarika fa miresaka amin'izao fotoana izao izy, toy ny hoe mbola mbola vadiny i Abit amin'izao vanimpotoana izao. (11)
Ismail dia nanambara hatrany fa te-hanambady an'i Cevirye, farafahakeliny mandritra ny fivoriana farany nataony niaraka tamin'i Ian Stevenson, izay nitranga tao amin'ny 1973. Tamin'ny vanim-potoana tamin'ity fihaonana niaraka tamin'i Stevenson ity, dia i XMUMX taona i Ismail no nitatitra ny fitiavany tsy tapaka ny Cevirye.
Fihetseham-po taloha, tantaram-pitiavana fiainana taloha & ankizy taloha
Raha teo anelanelan'ny iray sy enina sy tapany izy dia nilaza i Kerim rainy, fa nanao izao fanambarana manaraka izao i Cevirye:
"Iza no mahafantatra raha noana ny zanako?" (12)
Milaza ny rahalahy Cevirye fa rehefa tanora i Cevirye, dia matetika izy no nangataka ny haka ny toerana nipetrahan'ny Sehide zanany. Tamin'ny farany, dia nalain'i Cevirye tany an-tranon'i Hatice Suzulmus, vadin'i Abit Suzulmus voalohany sy velona. Hatice dia nanangana ireo ankizy niaina tao Abit sy Sehide Suzulmus.
Raha nangataka an'i Zeki, zanaky Abit sy Sehide i Cevirye, dia tsy niasa i Hatice. Cevirye dia nisisika ary nahita Zeki matory teny ambony rihana, izay nikarakara azy tamim-pitiavana.
Cevirye dia nanohy naneho ny fifandraisana tamin'ireo zanaky Abit sy Sehide farafaharatsiny raha tsy tamin'ny taona 14. Rehefa nanambady i Ziki, zanany lahy tamin'ny fahazazany vao teraka dia nanambady, Cevirye ary tezitra mafy fa tsy nasaina izy.
Cevirye dia nanohy nitsidika an'i Ziki sy Hikmet, ireo ankizy niaina tao Abit sy Sehide, tamin'ny 1973, fony i Cevirye dia 15 taona.
Tahaka izany ihany koa, fony tanora i Ismail, dia tena liana tamin'ny ankizy Abit ary naniry ny hikarakara azy ireo. Nanantitrantitra i Ismail fa ny raim-pianakaviana dia mitondra sakafo ho an'ireo ankizy ao Abit sy Sehide. Ireo fizarana ireo dia voatatitra amin'ny antsipiriany amin'ny tranga Abit Suzulmus | Ismail Altinkilic.
Ian Stevenson dia nihaona tamin'ny Cevirye tamin'ny andro nahaterahany, tamin'ny 1 1967 tamin'ny 15 XNUMX fony izy XNUMX taona. Stevenson dia gaga tamin'ny tovovavy tsara tarehy nihaona taminy teo am-baravarana, satria tsy nahita azy nandritra ny taona vitsivitsy.
Cevirye mifandraika amin'i Ian Stevenson fa indraindray izy dia mihaona amin'i Ismail eny an-dalambe, saingy hitany fa menatra izy hiteny aminy. Mbola nitohy ihany anefa izy mba hitsidika ny zanatsin'i Sehide, Ziki sy Hikmet, tsindraindray.
Ny Fanahy Mitarika: Misy tranga roa amin'ity raharaha ity izay misy ny fanahy.
Voalohany, nisy ny nofinofin'i Kerim, rain'i Cevirye, taorian'ny nahaterahany. Tao anatin'ity nofy ity dia niseho taminy Abit Suzulmus ary nilaza tamin'i Kerim fa nandefa fanomezana ho azy izy. Abit dia nanondro an'i Cevirye, izay vadin'i Abit, Sehide, teo amin'ny fiainany vao tafaverina.
Tsarovy fa i Abit dia efa niorina indray tamin'ny hoe Ismail Altinkilic ary efa teo amin'ny herintaona i Ismail rehefa nitranga io nofinofy io. Izany dia maneho ny fomba ahafahan'ny fanahy mahavita miasa tsy miankina amin'ny fampodiana ara-batana, toy ny fanahin'ny Abit | Afaka nifandray tamin'i Kerim tao anaty nofy i Ismail raha mbola nofo i Ismail. Ity fahaiza-manaon'ny fanahy izay miasa tsy miankina amin'ny fampodiana ara-batana ity dia resahina ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny hoe, Soul Evolution.
Ny ohatra faharoa momba ny zavaboary dia ny fahalalana Cevriye fa teraka taorian'ny namonoana azy ny zazalahy. Rehefa maty i Sehide dia tsy maintsy ho voamariny avy amin'ny tontolon'ny fanahy izay nitranga taorian'ny nahafatesany. Tadidio fa ny fanadihadiana momba ny heloka bevava an'io famonoana io dia nahitana ny fasan'i Sehide tao amin'ny fasana mba hahitana raha bevohoka izy rehefa maty. Rehefa nisokatra ny fasana, dia hita fa bevohoka tokoa izy ary voatifitra ny zaza tao an-kibony.
Fiainana taloha Phobia: Amin'ny maha-zaza kely azy, i Cevriye dia nanana volon-drindrina nantsoina hoe maizina, izay nanohy hatramin'ny faran'ny taona 15 taona. Ho ohatra iray, rehefa nivoaka ny herinaratra tao an-tranony ary nanjary maizina ny trano, dia nanomboka nitomany i Cevriye ary nihazakazaka tany amin'ny reniny sady niantsoantso hoe:
"Hamono ahy i Ramazan." (13)
Tsarovy fa nandritra ny fiainany taloha toa an'i Sehide, novonoin'i Ramazan tao anaty haizina izy rehefa nandeha nijery ny fanemorana ny vadiny, Abit, raha nandeha tany amin'ny tranobongo izy mba hijery biby iray malemy.
Firaisana ara-pianakaviana tafaray amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny vatana vaovao: Abit sy Sehide Suzulmuz dia novonoina tany Adana, Torkia, ny volana Janoary 31, 1957. Fotoana fohy taorian'izay, dia niara-nivory indray izy ireo tany Adana.
Abit reincarnated tamin'ny 30 1957, 1 ho Ismail Altinkilic, ary Sehide kosa dia niorina indray ho Cevriye Bayri tamin'ny oktobra 1958, XNUMX. Noho izany, samy niverina indray ny roa taona latsaka taorian'ny nahafatesany.
Rehefa nianatra momba ny fahatsiarovana an'i Ismail ny maha-fialantsasatra ny fianakavian'i Cevriye dia nanomana fivoriana ho an'ny ankizy izy ireo, izay nitranga fony dimy taona i Ismail ary i Cevriye dia efa-taona. Araka ny voalazan'ny rain'i Ismail, rehefa nihaona voalohany i Cevriye sy Ismail, dia nihazakazaka izy ireo, nifamihina ary nanoroka. Ny renin'i Cevirye koa dia nitantara fa namihina an'i Cevirye i Ismail.
Mbola nanambara ny fitiavany sy ny fikasany i Ismail hanambady an'i Cevirye, farafaharatsiny, mandra-pahatongan'ny 16 taona. Mifanohitra amin'izany kosa, tamin'ny fotoana niainan'i Cevirye taona 15 taona, dia nitantara tamin'i Ian Stevenson izy fa rehefa nifampiresaka mivantana teny an-dalambe izy ireo dia sahiran-tsaina ny hiresaka amin'i Ismail amin'ny fiainany taloha.
Na dia tsy fantatsika aza raha i Cevirye sy Ismail dia afaka nanavao ny tantaram-pitiavana tamin'ny tantaram-bokin'ny tantara, dia fantatsika fa afaka nivory indray i Abit sy Sehide ary nanavao ny fifandraisana na dia mbola misy ny vatana hafa aza, tahaka an'i Ismail sy Cevirye.
Mariho fa ny sary atolotra ao amin'ity pejy ity dia tsy avy amin'ny olan'ny tranga ity, fa sary nampiasaina hanamboarana ity tranga ity.
1. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 236
2. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana gospet, Boky III, Roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 237
3. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 254
4. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 248
5. Stevenson, Ian: Fomba tahaka ny karazana gay vaovao, Boky III, Roambinifolo roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 249-250
6. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 251
7. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 247
8. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana gospet, Boky III, Roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 248
9. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana virijiny. Boky III, Roambinifolo Roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 248
10. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 254
11. Stevenson, Ian: Fomba tahaka ny karazana gasy vaovao, Boky III, Roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 257
12. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 255
13. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 254